Repair BlackBerry — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Isikhungo sesevisi ekhethekile Ulwazi lwezindlela zokulungisa BlackBerry — senza ukulungiswa ngekhwalithi ephezulu. Izingxenye zangempela. Zonke izinhlobo zokukhanda i-BlackBerry: ukufakwa kwesikrini, isikrini sokuthinta, ibhethri, ikhamera, izikhulumi, ukufakwa kwekhibhodi.
↓ Iya kumanani kanye nencazelo yezinsizakalo zokulungisa
Uma u— umsebenzisi BlackBerry, kusho ukuthi usuvele waba umsizi wakho oyimfuneko. Kuyinto engenakulinganiswa, futhi ukusebenza okungaholela ekusebenziseni ukungasebenzi kungathinta kakhulu izinhlelo zakho futhi kunciphise ukusebenza kahle komsebenzi. Ngenhlanhla, ochwepheshe bethu bayakwazi ukwenza cishe zonke izinhlobo zokulungisa i-BlackBerry ngokuphepha futhi ngokushesha. Uma ngabe idivayisi ingavali, izinkinobho ziyeka ukusebenza, uma uphonsa ifoni emanzini noma ushaya isikrini, noma unenkinga enye yehadiwe edinga ukulungiswa — sizokwenza konke okusemandleni ethu ukubuyisela ukusebenza okugcwele efonini yakho.
I-BlackBerry — iyinkimbinkimbi eyinkimbinkimbi futhi ihlanganisa izingxenye eziningi ezihlobene. Uma ukusebenza kulimale (kubonakaliswe) yinoma yimuphi wabo, idivayisi ihluleka noma iphazamise ukusebenza kwayo. Isikhungo sethu sesevisi kuphela sinikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo zokulungisa kuzo zonke izinhlobo zeBlackBerry, kufaka phakathi:
Ukufaka isikrini kwesikrini, isikrini sokuthinta kanye nomhlangano weskrini
Ukufaka esikhundleni sekhibhodi nama-chips ayo ngomswakama
Ukuhlanza nokufaka ithrekhi ye-trackball ne-trackpad BlackBerry
Ukufakwa kwesigubhu, isigaba esiphakathi kanye nezinye izakhi zomzimba
Ukufaka esikhundleni se-dynamics
Ukulungiswa kwe-USB port, isixhumi sekhadi le-SIM, amandla
Ukufaka esikhundleni sesehlakalo nezinye izingxenye BlackBerry (ikhamera, isikhulumi, i-USB port)
I-Info Center InfoResheniya-BlackBerry inikeza futhi iwaranti yokukhanda kwamadivayisi weBlackBerry athengwe kithi. Funda kabanzi mayelana newaranti ukukhanda BlackBerry .
Isikhungo sethu sesevisi sinikeza nezinsizakalo zokunakekela kuzo zonke izinhlobo zeBlackBerry. Isibonelo:
Ukufaka ikhibhodi yaseRussia ku-smartphone BlackBerry
Ukuhlanza kusuka kokungcola: i-trackball, isikrini, ikhibhodi nezinye izakhi zomzimba
Ukunciphisa i-SIM khadi kwindinganiso ye-Micro-SIM yamamodeli ku-OS BlackBerry 10
Isivikeli sombukiso wesitika
Ukufaka umbala wombala, icala lombala
Kungani ukhetha isikhungo sethu sevisi yokulungisa BlackBerry
Ukulungiswa kweBlackBerry ukulungele ukuthatha izikhungo zesevisi, ezizwa "i-Blackberry" okokuqala. Bangakwazi ukulungisa i-Nokia, i-Samsung, i-Apple — kahle, kodwa hhayi iBlackBerry. Kithi ukukhethekile kwe-BlackBerry —, futhi nansi izizathu ezimbalwa zokukhetha i-Info Solutions ukulungisa idivayisi yakho:
Ochwepheshe bethu bayazi kahle zonke izinhlobo zeBlackBerry futhi bayakwazi ukubona zonke izinhlobo zezinkinga
Sisebenzisa kuphela izingxenye zokusindisa zangempela BlackBerry. Ngokuvamile sithola ukulungisa idivayisi ngemuva kokulungiswa kwezinye izikhungo zesevisi futhi sithole ukuthi izingxenye ezingekho zangempela zisetshenzisiwe.
Zonke izingxenye ezisele zokulungisa i-BlackBerry, yazo zonke izinhlobo, esitokisini — kuphela kithi. Uke unikeze iBlackBerry yakho kwenye isikhungo senkonzo? I-— kungenzeka ukuthi bathenga ingxenye engasese yokulungisa idivayisi yakho noma kunjalo kusuka kithi.
I-Warranty — izinyanga ezingu-6 kuzo zonke izinhlobo zokukhanda.
Kungenzeka ukulungisa i-BlackBerry ngesaphulelo sezingu-90% uma usebenzisa iused replacement parts. Lokhu akuthinti iwaranti kanye nekhwalithi yomsebenzi owenziwe.
Sicela wazi ukuthi kunoma iyiphi isikhungo sezinsizakalo uzothenjiswa ukwenza ukukhishwa kwe-BlackBerry ngeshibhile, ngokushesha nangempumelelo, empeleni uzosebenzisa isikhathi sakho, imali namandla. Ngokuvamile abanayo izingxenye zokungcebeleka i-—, bazobheka, abanalo ulwazi namakhono i-— izosithinta ikhwalithi yokulungisa.
Udinga ukulungiswa kweBlackBerry? Xhumana neSikhungo Esikhethekile Sokwaziswa Zolwazi!
Izingxenye zokusindisa zeBlackBerry
I-Info Solutions — isembozo sezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry # 1 emhlabeni. Amakhasimende ethu yizikhungo zesevisi, izinkampani kanye nabantu ngabanye e-United States, eCanada, eYurophu, e-Indonesia nakwezinye izingxenye zomhlaba.
Zonke izingxenye ezisele zeBlackBerry .
Kuphela sinalo ikhathalogu enkulu kunazo zonke izingxenye ezisele zeBlackBerry. Sikunikeza izincazelo eziningiliziwe, izithombe eziphezulu, ulwazi lokuhambisana, nezincomo zokulungisa. Ukuhleleka izingxenye zokungcebeleka ze-BlackBerry enkampanini yethu, uthola ngokuqondile lokho okubonayo, izithombe ze-— zenziwe ngempahla yangempela. Uma uyala ingxenye yokuqala, uzothola ingxenye yokuqala. Ufuna ukusindisa? Hlela iused replacement parts ngewaranti!
I-Disassembly and Repair Manual yeBlackBerry
Njengoba kungenakwenzeka njalo ukuletha i-smartphone yokulungisa esikhungweni sethu senkonzo eMoscow, sikudala imiyalo yokulungisa nokwahlukana kweBlackBerry .
Sicela uqaphele ukuthi imiyalo yokulungisa ye-BlackBerry ihloselwe ochwepheshe, futhi ukuzilungisa ngokwakho kungalimaza i-smartphone yakho noma izingxenye zayo.
Lungisa amanani BlackBerry
Ukuze ujwayele amanani nesikhathi esilinganisiwe sokulungisa nokugcinwa kwamadivaysi e-BlackBerry, sebenzisa ithebula elingezansi. Sicela uqaphele: itafula libonisa kuphela amanani ezinsizakalo zokulungisa, izingxenye ezisele nezingxenye zikhokhelwa ngokungeziwe.
Ukuhlonza Ukugula izinkinga BlackBerry mahhala, uma ukulungiswa.
Uma iqembu lakho Asikuzwa, noma ukubukela disconnections ngisho emazingeni aphezulu isignali, cishe imakhrofoni idinga ukushintshwa. Xhumana uma izinkinga ezifanayo.
* Price incike microphone ukuba kubekwe ku kwezinye tinkhulumo — setha 2, 3, 4 ngisho umbhobho. Bheka uchwepheshe wethu. Ukuze bavale isikhala salo imakhrofoni, sidinga izinsuku 1-3, noma enze on-site, kuye ngokuthi imodeli BlackBerry.
Ukukhipha i-isixhumi ikhibhodi
ikhibhodi Isixhumi kwenza ukuxhumana ikhibhodi chip kuya motherboard. Sizokwenza sifeze Isixhumi indawo izinsuku 1-5.
Ukukhipha i-Isixhumi Camera
Isixhumi — ikhamera element encane sebuningini contact imilenze lebhokisi main noma front (selfie) ikhamera motherboard unit. Uma isixhumi ilimele, it idinga ukushintshwa. Sizokwenza afeze esikhundleni egumbini Isixhumi izinsuku 1-5.
HDMI-Isixhumi on the BlackBerry replacement
HDMI — interface for isikhombi soxhumanoningi, okuyinto evumela ukudluliswa kwe-digital high-definition video. Esimweni umonakalo Isixhumi, ongoti bethu ingakusiza. Thina enze exhumanisayo replacement izinsuku 1-5, kuye ngokuthi imodeli BlackBerry.
Njengoba ezothatha isikhundla usebe
Njengoba ezothatha isikhundla usebe — omunye imisebenzi njalo kakhulu yokubuyekeza ukubukeka smartphone yakho, futhi udinga le sevisi ukusetha umbala usebe. Yenza endaweni imizuzu 10-15.
Ukubuyiselwa U-cover'a (engxenyeni engezansi yomzimba)
Ngokuvamile, uthenga smartphone eqhuba U-cover'om. Ukuqeda ukubhekisela esilawulayo opharetha Telecom, umyalelo le sevisi. Enze on-site for 5-10 imizuzu.
Ukubuyiselwa LCD Screen
Screen BlackBerry — (LCD), bangadluli "sensitive" umonakalo smartphone yakho, futhi, ngeshwa, asikwazi lilungiswe uma kwenzeka iphutha. Uma BlackBerry wakho kuyinto screen ephukile, noma wagcwala liquid, noma nje "yenkinga" futhi libonisa amabala anemibala noma umfanekiso elimhlophe, owukuphela kungenzeka ikhambi — ukuphindisela LCD screen.
Sicela uqaphele ukuthi kwezinye izimo (isibonelo, kwi BlackBerry Z10, Passport, Classic), LCD screen asikwazi uhlukane zokuthinta isikrini, bese esikhundleni kulezi zingxenye ngokwehlukana bengayi, — thintana nomhlinzeki nsizakalo wakho Screen Ukubuyiselwa ne umhlangano touch screen .
Enze on-site imizuzu 15-45.
Screen Ukubuyiselwa ne umhlangano touch screen
Ngoba onobuhle touch screen uma isikrini ezilimele (bonisa) noma touch screen ikhambi afanele kakhulu buyisela screen umhlangano touch screen ngokuqhubekayo njengenkathi eyodwa — element kuleli cala phakathi lezi zici siyohlala ukungcola, uthuli izigxivizo zeminwe. Futhi kwezinye izimo (isibonelo, BlackBerry Classic, Passport, Z10), isikrini nolimi kusukela screen touch, futhi esikhundleni kulezi zingxenye zingaba angabi yedwa.
Enze on-site imizuzu 15-40.
Ukubuyiselwa zokuthinta isikrini
Zokuthinta isikrini BlackBerry — kakhulu "sensitive" kulimaze smartphone yakho futhi ayikwazi ukulungiswa uma kwenzeka iphutha. Uma BlackBerry yakho ephukile noma ezilimele zokuthinta isikrini, — okuwukuphela kwekhambi eliphelele kungenzeka omusha.
Sicela uqaphele ukuthi kwezinye izimo (isibonelo, kwi BlackBerry Z10 kanye Q10), LCD screen asikwazi uhlukane zokuthinta isikrini, bese esikhundleni kulezi zingxenye ngokwehlukana akakwazi, — ubheke Screen Ukubuyiselwa service umhlangano esithintwayo.
Ukubuyiselwa izindlu ezigcwele
Ukubuyiselwa izindlu umnyuziki kuhlanganisa ukufakwa phakathi okuyingxenye, usebe, Top-cover'a and U-cover'a, ibhethri nesembozo nezinye izingxenye uma ekhona ukucushwa. Ngokuvamile, ngokugcwele balayisha setha bezinhlamvu original futhi ezinemibala — ngokwengxenye .
Enze on-site for Amaminithi ayi-10-30.
Esikhundleni isidumbu isethi akuphelele (umbala emzimbeni)
Esikhundleni isidumbu umhlangano lingaphelele ngokuvamile kuhlanganisa ukufakwa usebe, Top-cover'a and U-cover'a, ikhava yebhethri. Ngokuvamile, ngokugcwele balayisha setha bezinhlamvu original futhi ezinemibala — lingaphelele.
Ukukhipha maphakathi sikebhe
Ukukhipha ingxenye maphakathi umzimba wenziwa ukuvuselela ukubukeka, zalezo zinkinga nesikhulumi noma ezinye izingxenye edidiyelwe kuwo. Enze on-site for Amaminithi ayi-10-30.
Uma unezinkinga nge kwekhibhodi kuyinto ngokuvamile indlela yokuphuma iwukuba buyisela substrate yayo. Uma lo mshini uthola ezimanzi, ezinye izinkinobho musa ukusebenza, kabili, noma awasebenzi njengoba kufanele — udinga ukuba esikhundleni substrate ikhibhodi. On imishini nge chip efakwe ozongena esikhaleni ikhibhodi chips.
Sizokwenza bafeze umsebenzi esakhiweni imizuzu 10-25.
Uma unezinkinga ikhibhodi ezengeziwe (call izinkinobho kanye amamenyu) avamise ukubanzima indlela yokuphuma iwukuba buyisela substrate yayo (chip). Uma lo mshini uthola ezimanzi, call izinkinobho noma amamenyu engasebenzi, kabili, noma awasebenzi njengoba kufanele — udinga ilokhi yekhiphedi replacement chip.
Enze on-site imizuzu 15-50.
Kanye esikhundleni ikhibhodi main, ungakwazi ukushintsha nokuningi (shayela izinkinobho kanye amamenyu). Enze on-site for Amaminithi ayi-10-30.
Ukuze bavale isikhala salo slot imemori khadi
Ukuze bavale isikhala salo slot imemori khadi edingekayo uma idivayisi asisho "abone" kahle yini imemori khadi noma umsebenzi nalo ngendlela efanele.
Umnqamulajuqu sixhomeke kakhulu imodeli: kusukela imizuzu engu-15 kuya izinsuku 5.
Changing Dynamics yokukhuluma
Uma ungezwa interlocutor yakho phakathi nengxoxo, cishe kudingeka ukuba esikhundleni isikhulumi izwi. Le sevisi esikhundleni Dynamics yokukhuluma (ingxoxo) for BlackBerry, uma udinga okunye esikhundleni abezindaba isikhulumi (wocingo, umculo) — ukubona isevisi esihambelanayo .
Thina enze lo msebenzi endaweni imizuzu 20-40.
Ukubuyiselwa yabezindaba isikhulumi
Uma udinga ukushintsha isikhulumi abezindaba: wawungezwakali umsindo wezwi lakhe lapho ebukela video nokulalela audio, akukho umsindo for ucingo olungenayo. Le sevisi media ukuphindisela isikhulumi (wocingo, umculo) ngoba BlackBerry, uma udinga ukuba esikhundleni izwi isikhulumi (Ingxoxo) — ukubona isevisi esihambelanayo .
Ukukhipha ingilazi kwesikrini
Ngoba amadivayisi lapho isikrini ezinoqwembe zokuzivikela "ucezu lwengilazi" (ngokuvamile Ijika uchungechunge amafoni), kuyingxenye ebalulekile isibuyekezo uzothathelwa indawo umhlaba — ngoba lesi sakhi Into ephawuleka kakhulu. Ukuze onobuhle ingilazi touch, bheka service Ukubuyiselwa zokuthinta isikrini .
Enze on-site imizuzu 10-20.
Sizokwenza afeze ukufakwa inhlangano ikhibhodi endaweni imizuzu 15-30.
Umbadlana — "Inhliziyo" yale BlackBerry yakho. Ezimweni lapho kuba ukukhanda engenakwenzeka, kumele kuthathelwe indawo. Enze on-site imizuzu 20-50.
Ukubuyiselwa ekamelweni main
Uma ikhamera kuvuliwe ehluleka, noma awukwazi wenze shot esicacile — ke kungenziwa bazitshela ukuthi ikhamera idinga ukushintshwa. Le sevisi esikhundleni egumbini main (esisogwini ngemuva) for BlackBerry, uma udinga ukuba esikhundleni front ikhamera (front) — ukubona isevisi esihambelanayo .
Ukubuyiselwa front ikhamera
Uma ikhamera kuvuliwe ehluleka, noma awukwazi wenze shot esicacile — ke kungenziwa bazitshela ukuthi ikhamera idinga ukushintshwa. Le sevisi esikhundleni front ikhamera (akhiwe phambi) for BlackBerry, uma udinga ukuba esikhundleni ikhamera main (bakhulise) — ukubona isevisi esihambelanayo . Enze on-site imizuzu 15-40.
Ukubuyiselwa Top cover'a (ingxenye engenhla yomzimba)
Ingxenye engenhla yomzimba noma bayawushintsha Top ikhava ngenxa yezizathu eziningana, lo — main elise okhiye bakhe beyeka ukusebenza. Okubaluleke ukubukeka. Qaphela ukuthi kwamanye onobuhle BlackBerry, isibonelo, 9700, Top cover kuyingxenye ye rim futhi akashintshi ngokwehlukana — ukubona service Ukubuyiselwa usebe.
Enze esikhundleni emzimbeni elingaphezulu endaweni imizuzu ayi-10-30.
USB-isixhumi sifana kolunye uhlangothi idivayisi ukushaja, ngakolunye — ukuvumelanisa nge PC. Yingakho kubalulekile kangaka ngokushesha bayawushintsha ezilimele USB-isixhumi. Thina enze exhumanisayo replacement izinsuku 1-5, kuye ngokuthi imodeli BlackBerry.
Ukubuyiselwa slot SIM khadi
Uma isixhumi ephukile BlackBerry SIM khadi, awukwazi ukusebenzisa idivayisi yakho — kuzokwenza "izitini" nje. Thina ingakusiza ngokufaka esikhundleni slot SIM khadi. Sizokwenza sifeze Isixhumi replacement izinsuku 1-5, kuye ngokuthi imodeli BlackBerry.
Ukukhipha i-Jacks audio
jack Audio ikuvumela ukuba usebenzise i-hedsethi noma headphones kanye aux-uxhumano, ezifana uhlelo imoto stereo. Uma kungukuthi le nto egijima kancane, ungaxhumana nathi for a replacement. Umnqamulajuqu sixhomeke kakhulu imodeli: kusukela imizuzu engu-15 kuya izinsuku 5.
Qedela yokuhlanza of udoti
In the inqubo nokusebenzisa idivaysi yakho ingcoliswe, hhayi ngaphandle kuphela kodwa futhi ngaphakathi. Esiqongelela uthuli futhi enenhlabathi hhayi kuphela zilulaza ukusebenza izakhi mechanical njengemoto trackball futhi ikhibhodi, kodwa futhi kwandisa ukumelana in the wesifunda kagesi zedivayisi. Ukuphathisa ukuhlanza idivayisi yakho onguchwepheshe ubani ongasihlakaza ahlukanise ngokuphelele, uyokwenza inqubo, futhi uyoletha ndawonye ngendlela efanele.
Sticker zokuzivikela ifilimu — hhayi obangela ezimnandi ngisho onguchwepheshe. Ukuze enze inqubo, kufanele ukhambisane nayo ubuchwepheshe: ukuze alungiselele izimo ezifanele ukusebenzisa uketshezi ekhethekile nekhadi uyisuse. Kuphela ngale ndlela avalwe ifilimu smooth and "bubble-free ' .
Enze on-site imizuzu 10-15.
Uma unezinkinga isidlidlizi (isidlidlizi ayisebenzi) sicela uxhumane ongoti bethu ukuba esikhundleni isidlidlizi. Umnqamulajuqu sixhomeke kakhulu imodeli: kusukela imizuzu engu-15 kuya izinsuku 5.
Ukukhipha ikhava yangemuva
On izinhlobo eziningi BlackBerry bayawushintsha lid kulula futhi ungakwenza ngokwakho imizuzu 2 — ngoba kuyinto esikhiphekayo! Nokho, kwezinye tinkhulumo sebenzisa umzimba Monolithic futhi esikhiphekayo cover ezingemuva, isibonelo, DTEK50, Priv, Passport, Classic, Playbook kanye Q5. Ezimweni ezinjalo, singakwazi ukukusiza.
Iningi onobuhle BlackBerry ukuthi ushintshe ibhethri ngelinye kulula futhi ungakwenza ngokwakho imizuzu 2 — ngoba kuyinto esikhiphekayo! Nokho, kwezinye tinkhulumo sebenzisa umzimba Monolithic nebhethri non-esikhiphekayo, ngokwesibonelo, Priv, DTEK50, Classic, Passport. Ezimweni ezinjalo, singakwazi akusize ufeze — ukuphindisela ibhethri endaweni imizuzu ayi-10-30.
Izihlahla-SIM khadi kuya Micro-SIM standard
New umsebenzi onobuhle BlackBerry nge-SIM khadi Micro-SIM standard. Ngakho-ke, uma une-SIM khadi njalo, kumele ngokufanele asikwe — kuyosishintsha standard Micro-SIM.
We Ukunquma-SIM khadi kuya Micro-SIM standard Smartphones BlackBerry 10 imizuzu 5.
Sticker ifilimu zokuzivikela esibukweni futhi izindlu
Sticker ifilimu zokuzivikela on the — hhayi screen obangela ezimnandi ngisho onguchwepheshe. Yini esingayisho ngesimo isethi ephelele ye ifilimu esikrinini futhi izindlu BlackBerry! Sicela uqaphele, uma udinga kuphela ifilimu esibukweni, ngaphandle nokunamathisela — izindlu ukubona inkonzo esihambelanayo .
Enze on-site imizuzu 15-25.
Isixhumi Ukubuyiselwa isikrini noma zokuthinta isikrini
Isixhumi — element encane sebuningini contact imilenze, isibonelo, isikrini noma zokuthinta isikrini Isixhumi on BlackBerry. Uma isixhumi ilimele, it idinga ukushintshwa. Sizokwenza sifeze Isixhumi indawo izinsuku 1-5.
Ukubuyiselwa amandla Isixhumi supply (battery)
Njalo smartphone kumele lusekelwa ngamandla ebhethri, futhi kubalulekile ukuba ukuxhuma exhumanisayo. Uma isixhumi ilimele, it idinga ukushintshwa.
Thina enze exhumanisayo replacement imizuzu engu-30 kuya izinsuku 3-5, kuye ngokuthi hlobo yayo.
Ukubuyiselwa kwe-sensor ukusondela futhi ukukhanya kuma
Uma unenkinga ukulungisa ukukhanya kwesikrini noma ikhibhodi backlight kuncike izibani ambient idinga ukushintshwa inzwa yokukhanya. Izinkinga ne impendulo ukusondela lezinto smartphone unit akakwazi ukukhubaza iskrini ngesikhathi socingo) — inzwaduze (imvelo).
Isikhathi ukutjhentjha: imizuzu engaba ngu-30.
Isinyathelo sokuqala nesibalulekile kubalulekile ukuthi uphethwe BlackBerry ukukhanda — kwencazelo inkinga, iphutha in ukusebenza kwe-smartphone. Kusukela impumelelo ukulungiswa, njengoba wazi, 50% inquma uphethwe, kubalulekile ukuphathisa lo msebenzi okuwukuphela best ochwepheshe.
Sifo kungathatha imizuzu engu-5 kuya ezinsukwini ezimbalwa, kuye ngokuthi yinkimbinkimbi imodeli kanye BlackBerry inkinga.
Iyabuyisela BlackBerry ukusebenza emva crash
The image on isihenqo BlackBerry sakho ebhuthini efanayo nalokho okubonayo ngenhla? Sekube ukwehluleka kohlelo lokusebenza. Izizathu kuzofundwa kuyinto ngokuvamile ayilungile "firmware" zedivayisi, noma ukufaka isofthiwe third-party. Amaphutha kungase kube nezinhlobo eziningana: Iphutha Isicelo noma JVM Iphutha 104, 507, 523, elinye libe BlackBerry OS 5-7 futhi www.bberror.com/bb10-0020, bb10-0015 elinye BlackBerry 10. Omunye isixazululo — edingekayo alulame operating system .
Ukufakwa Russian ikhibhodi inhlangano
Asikwazi kuphela ukuthenga keyboard Russian for BlackBerry, kodwa futhi ukuba asethe okufunwayo afeze uhlelo of Russification smartphone, okungukuthi, sikulungele ukukunikeza isixazululo okuphelele Russification. Ochwepheshe zethu ngeke ukufaka ikhibhodi Russian endaweni ngesikhathi 10-15 — imizuzu eze kithi e Ihhovisi noma oda amasevisi specialist isheke-out.
Intengo kuboniswe ngezansi, — ukufakwa services in Russian ikhibhodi kwenhlangano ukuze kokufaka ikhibhodi intengo lenkonzo ebandleni, bheka ikhasi esihambelanayo . Izindleko ikhibhodi ngokwayo ikhokhelwa ngaphezu (ungakhetha ikhibhodi, isibonelo, the original noma ikhophi ye-oqoshiwe noma izinhlamvu ophuzi).
The umbhalo yezincwadi Russian on the keyboard
Uma BlackBerry yakho ifakwe kwekhibhodi ngaphandle izincwadi Russian, le nkinga ingaxazululwa ngezindlela ezimbili:
Faka isicelo izinhlamvu Russian laser umbhalo
Setha factory ikhibhodi Russian.
Le — service option kuqala. Umnqamulajuqu — izinsuku 1-2.
Uma unesithakazelo a — yesibili uphawule inkonzo ukufakwa ikhibhodi Russian (kuleli cala izindleko ikhibhodi icala extra, futhi une ithuba lokukhetha ikhibhodi original, ikhophi, noma ikhibhodi nge umbhalo).
Funda kabanzi mayelana ukukhanda BlackBerry
Ukulungisa onobuhle BlackBerry ezahlukene uhluke yinkimbinkimbi futhi ngaleyo ndlela isikhathi kanye nezindleko. Ngaphezu kwalokho, besebenzisa ezihlukahlukene amathuluzi kanye izingxenye ezisele ukuze kulungiswe. Ezingxenyeni ezithile onobuhle ezahlukene BlackBerry ungathola emakhasini alandelayo izesekeli izingxenye ezisele for BlackBerry . Izingxenye asetshenziswe onobuhle eziningana BlackBerry, ubheke izigaba:
Umbadlana for BlackBerry
Screens, uthinte izikrini ingilazi esibukweni BlackBerry
Izixhumi ze-SIM amakhadi, inkumbulo amakhadi, namakhasethi alalelwayo, vibro motors BlackBerry
Izikhulumi, imibhobho, USB-isixhumi kanye HDMI-isixhumi, ikhamera BlackBerry
Uma ufuna ukwazi mayelana nezindaba ezivame kakhulu BlackBerry imodeli ethize, noma sifunde ngazo izici ukukhanda zayo futhi disassembly, kufanele ubheke ingxenye Izihloko kanye nemiyalelo disassembly Smartphones .
Contact for izinkinga BlackBerry service in InfoResheniya!
Siyajabula ukweluleka kuwe futhi ukuxazulula izinkinga zakho ezihlobene ukukhanda kanye nokugcinwa BlackBerry Smartphones!